Nezvedu - Ningbo Huayu Network Technology Co. Ltd.
Tsvaga Zvizhinji Nezve Nomi
8 akazara maseti e
zvakasununguka zvakagadzirwa zvemukati zvekudzidzisa.
Tichiomerera kune yakakosha pfungwa yekutsinhana kwetsika, mutauro kutanga, isu tinoteedzera yakasarudzika nzira yeVadzidzisi muChina, Vadzidzi kutenderera pasirese kuitisa Chinese dzidziso.
Vanopfuura vadzidzi ve500 vanodzidza Chinese nesu
Yedu-kune-yakawanda, kudyidzana kwakavakirwa musimboti kudzidzisa zvigadzirwa zvakave zvakaburitswa munyika zhinji pasirese uye zvakanyanya kurumbidzwa nevadzidzi vekunze.
1200 Nomi Chinese pamhepo yakaunganidza anopfuura maawa zviuru gumi nezviviri zvekudzidzisa nguva pamhepo.
Nomi anoomerera pane hunyanzvi uye anotora iyo modhi yeInternet + Dzidzo kuti tigare tichizvivandudza isu uye nekuvandudza ruzivo rwevashandisi.
Nei tichifanira kudzidza Chinese muNomi?
Inofara nzira yekudzidza:Pano, iwe uchasangana neinonakidza kwazvo yekudyidzana kirasi. Isu tinoshandisa kudzidzisa mamiriro, mitambo uye dzimwe nzira kuita kuti vana vadzidze uye vadanane neChinese. Imwe-kune-imwe yakasarudzika makosi, imwe yemakirasi madiki mana, inoita kuti kudzidza kwevana kuve kwakasiyana-siyana.
Mhando zhinji dzedzidzo: Pano, unogona kuwana iwo akakodzera makosi. Hazvina mhosva kuti urikutanga kubva pakutanga kana chiChinese chemberi, iwe unogona kuwana chaicho makosi pano. Zero Basic Chinese, kuverenga, kunyora, kutaura, kutaura mufananidzo, HSK, AP Chinese ... Kune mamwe akazara masvomhu makosi aunosarudza.
Zvemagariro kudzidza: Pano, haugone chete kusangana nemuseki mudzidzisi, asi zvakare batsira mwana wako kuti awane mudiwa wekufunda naye, kuitira kuti usazogara uri wega mukudzidza Chinese.
Vadzidzisi vakawanda:Pano, iwe unogona kuwana ese marudzi evadzidzisi, anosetsa, akanyatsoita, murwere, akaomarara uye akakomba ... Iko hakuna chikonzero chekushushikana nezvevadzidzisi vasinganzwisise vana. Vadzidzisi vedu veChinese vese vane ruzivo rwekunze kwekudzidzisa. Kudzidziswa kwakakwana kwekudzidzisa kunoita kuti vadzidzisi vedu vave vakanyanya kunaka.
Kuteedzera kwevatengi chaiyo-nguva mhinduro: Pano, iwe uchasangana nevanonyanya kushivirira vatengi. Kana vadzidzi kana vabereki vakasangana nedambudziko, vadzidzisi vebasa revatengi vanokubatsira, kuitira kuti kudzidza kwemwana kuve nyore, kuti vabereki vanzwe kuchengetedzeka.
Miss Becky, vanobva kuChina, vane bachelor's degree muInternational Chinese dzidzo. Akambodzidzisa maChinese makosi kuyunivhesiti uye ane hunyanzvi hwekuChina hunyanzvi. Ndine makore angangoita mana ekuziva ruzivo. Ini ndakambodzidzisa chiChinese kuvadzidzi veMaldives uye ndikapinda muchirongwa chekuChina chekuchinjana chezvikoro zvepasi rose muUnited States.
Mr. Li vanobva kuChina uye vane degree reBachelor. Ane ruzivo rwakawanda rwekudzidzisa uye anofarira kushanda nevana. Iye achapa inonakidza kirasi yevadzidzi uye kuvaita kuti vafare kudzidza. Li anokwanisa kubatanidza iyo TPR nzira yekudzidzisa mukudzidzisa pamhepo uye kubatsira vadzidzi kuti vanzwisise zvirimo. Iye akanaka pakushandisa zvinoonekwa, kungave kuri Powerpoint kana akabata chena, anogona kushandisa mamaki kukwezva kutarisa kwevadzidzi. Anokurudzira vadzidzi vake kuti vataure uye vashandise mitsara yakazara kazhinji sezvazvinogona.
Jo anobva kuChina uye ane bachelor's degree muChinese International Dzidzo. Jo ane makore mana ekuziva ruzivo, kusanganisira kudzidzisa muzvikoro zvepuraimari uye zvejunior. Haagoni kumirira kukuona. Vana vachada kudzidza naJo. Jo ari kutarisira kuona vana vakanaka mukirasi yeNomi. Uyai mubatane naye!
kutarisira kusangana newe mukirasi yeNomi!
Runhare: + 1 209 763 8854 (United States)
Runhare: +86 17365836697 （China）